Soomaaliya oo Ciyaartay kulan ka tirsan Koobka Bariga iyo Bartamaha Africa – Radio Muqdisho
Xulka Qaranka Kubada Cagta Dalkeena Soomaaliya waxaa uu ciyaarayay Kulanki ugu horeyay ee kulamada koobka Bariga iyo Bartamaha Qarada Afrika oo Sanadkaan lagu qabanayo Dalka Ethiopia.
Soomaaliya ayaa kulan adag la Ciyaartay Xulka Qaranka Dalkaasi Tanzania Ciyaar xiiso badan oo halkaasi lagu soo bandhigay ayaa soomaaliya waxaa ay Kala kulantay guuldaradii todobaad oo ay Kala kulantay Xulka Qaranka Dalkaasi Tanzania,
Waxaana Soomaaliya looga adkaaday 4-0 Afarta gool ee looga adkaaday Soomaliya ayaa waxaa laga dhaliyay labada qaybood ee ciyaarta minn Laba Gool,
Iyadoo Afartaasi Gool ay min Laba gool u qaybsadeen Elias Maguli iyo John Bocco oo u Ciyaara Tanzania.
Tanzania oo ciyaarta Awood badnayd ayaa waxaa ay abuurtay 28 fursadood oo ay Gool ku dhalin kareen balse Gool Haye Khaalid oo is hortaagay Weeraryahanada Tanzania ayaa diiday in ay dhaliyaan in ka badan Afar gool,
Waxaana Khaalid uu badbaadiyay sagaal fursdood oo gool la oran karay.
Soomalia oo dadaal muujisay qaybtii danbe ee ciyaarta ayaanan u suurto gelin in ay dhaliso goolka Calanka waxaana taasi ay noqoneysaa in Soomaaliya ay ku guul dareysatay in wax gool ah ay dhaliso kow iyo toban kii kulan ee ugu danbeysay oo ay ciyaartay.
Sidoo kale shantii kulan ee ugu danbeysay oo ay ciyaartay waxaa laga dhaliyay 17 gool.
Dhanka kale Soomaaliya oo guul gaartay waxaa ugu danbeysay. 03-01- Sanadkii 2009 kulan hal gool ay ugu adkaatay Xulka Qaranka Tanzania.
Kulankaasi ay adkaatay soomaaliya wixii ka danbeyay waxaa ay ciyaartay 20 Marka lagu daro kulankii ay maanta la ciyaartay Tanzania,
Waxaana dhamaan kulamadaasi ay barbaro gashay hal kulan oo qura halka Sagaal iyo toban kulan laga adkaaday.
Kulanka xiga ee koobka Bariga iyo Bartamaha Qaradda Afrika Soomaaliya ay la Ciyaari doonta Arbacada soo socota oo ay tariikhda ku asteysan tahay 25-11-2015 Xulka Qaranka Kubada Cagta Ethiopia oo koobka marti gelinaya Sidoo kale na guuldaro kale soo kulmay Xulka Qaranka Rwanda.